Izitayela zesitayela zesi-Chinese
Intshisekelo eMpumalanga ihlale ibonakala. Cishe wonke umklami unezinto zesitayela zasempumalanga, okubonakalayo ekutheni amaphethini aseMpumalanga, izitayela, imibala. Isitayela esifanayo saseMpumalanga sinezici eziningi, ngoba ihlanganisa isiko labantu base-Asia nabase-Arab. Enye yezimpawu zesitayela saseMpumalanga yisitayela samaShayina. Itholakala hhayi kuphela emgqeni wokugqoka, kodwa futhi ngaphakathi, izinto zokuhlobisa. Isitayela seShayina ngaso sonke isikhathi silula futhi sincane. Ngakho-ke, izingubo zesitayela seShayina zibhekene nokulula kwemigqa eqondile futhi eqinile, ukugcina okuncane kanye nemininingwane.
Isitayela seShayina sibonakala ngema-collar-stand, ama-blame amancane ahlukaniswe ngokuqondile ne-collar stand-fast fastener, ijaji elinezicucu kanye nokusikeka ezinhlangothini, kodwa ingaba yizicathulo ezimfushane, ngokuvamile kuya okhalweni. Kungakhathaliseki ukuthi i-trousers ebanzi noma, ngokuphambene nalokho, emincane, kusukela phansi, banamathele akhethekile noma band bandanisa.
I-Tsipao iyikhadi elivakashele isitayela seChina. Lezi zambatho zakwabesifazane baseShayina ziyisigqoko sephunga ngakwesokudla, i-collar-stand kanye nokusikeka ezinhlangothini. Ngaphandle, ungathola okufana ne-bathrobe.
Kuyinto engavamile kakhulu futhi engavamile ukubuka ingubo yokuhlwa, eqoshiwe njenge-tsipao. Ngaphezu kwalokho, le ngubo izonikeza umfanekiso wesifazane futhi igcizelele isibalo. Futhi ama-blouses namajeketi alokhu kunquma kufanelekile ukugqoka ngisho nasehhovisi.
Ukuhlanza ingubo kungenziwa kusuka kunoma iyiphi impahla. Yiqiniso, ungasebenzisa u-silk waseChina noma u-brocade, kodwa akudingekile. Izindwangu zesitayela seShayina kuboniswa ukusika kwezingubo, hhayi ngempahla yayo.
Ukugxila okuyinhloko ku-silhouette. Uma igqoke ngesitayela se-zipao senziwe ngendwangu yesatini futhi ihlotshisiwe, izesekeli ezingeziwe azidingeki. Kuhle kakhulu, futhi ukuhlobisa okungadingekile kungagcwalisa kuphela isithombe.
Esinye isici se-Chinese-style jacket-mandarin. Kungaba nge-collar stand-stand, noma nge-fastener ye-inkinobho engenamakhetho ngokulenga izingodo noma izibopho. Lesi sitayela sivame ukusetshenziselwa abaklami ukudala amamodeli amasha ama-raincoats, amajackethi namajazi.
Esinye isici sezambatho zesiShayina singubo yokugqoka. Ukuthungwa kwayo, kusetshenziselwa izindwangu ezikhazimulayo, okusetshenziselwa izinto zemvelo, isibonelo isilikhi. Ingemuva yesigqoko ngokuvamile ihlotshiswe ngezithombe zama dragons noma ezinye izilwane ezisuka emasikweni aseShayina, kodwa lokhu kungaba umhlobiso nje. Futhi ukuhlobisa isembatho kungaba izithombe zemvelo - izintaba, amagagasi, amafu nezitshalo.
Izembatho kwisitayela se-Chinese zihlangene kalula nanoma yini e-wardrobe. Isibonelo, ngaphezu kwesigqoko, leli cala lingagqoka ijaji le-mandarin, futhi i-zipao-style style nge-trousers eqondile noma i-skirt eqondile yama-classic. Uma i-tsipao i-monophonic, ngaphandle kwamaphethini ehlukile, umbala ozolile, isibonelo, omnyama noma obomvu, khona-ke le ngubo ingafakwa ngokuphepha ehhovisi.
Ngokuhlukile, kufanele uhambe ekukhethweni kwezicathulo. Ngoba isitayela seShayina sibhekwa yedwa, izicathulo zezintambo eziningi, izicathulo ze-brocade.
Ngesitayela samaShayina, izinwele ezibushelelezi ziyisici sekhanda. Zingaqedwa noma ziqoqwe ngekhanda eliphakeme, isibonelo, zihlanganiswe ebunini. Ungawuhlobisa ngezinduku zokhuni zokhuni. Futhi ukwakheka okulungile kuzoqedela isithombe sakho ngesitayela sesiShayina. Uma ungenalo umnikazi wesilwane esisehlotsheni se-alimondi, khona-ke ungakwazi ukubuka ukuma usebenzisa i-liquid liner. Dweba umugqa ohlangothini lwe-eyelashes ejwayele ijwabu leso isikhathi eside kunokujwayelekile. Izindebe zisebenzisa i-lipstick ekhanyayo. Ukwenza i-makeup akubuki okwesabekayo, ngamehlo asebenzisa izithunzi ezikhanyayo, ngakho ukugcizelela kuyobe sekubekwe ezindebe kuphela. Sebenzisa ukukhanya okukhanyayo kuma-cheekbones.
Imimoya ingabangela futhi ukuthintana kwe-charm esempumalanga. Uma useyintombazane encane, yithanda ama-sweet tart aromas, kwabesifazane asebekhulile, izinongo ezibucayi.
I-Cardigan nganoma yisiphi isenzakalo
Sihlanza izingubo zoboya ekhaya: indlela yokuhlanza imbobo yesikhumba se-mink
Ungakhetha kanjani ihembe lomuntu?
Indlela yokugqoka ipaki ngo-2017: 3 izithombe ezithakazelisayo ezivela kuma-stylists
Ukunakekelwa kwemikhiqizo yobomvu
Gqoka nge Chiffon
Setter English iyinhlobo yezinja
I-Horoscope ka-2010: I-Sagittarius, i-tiger
Izindlela zokuxazulula inkinga ye-arthrosis
Ama-champignons ane anyanisi
Indlela yokukhetha ubucwebe obufanele?
I-Horoscope yazo zonke izibonakaliso ze-zodiac ngo-2010
Ifomula yobuhle obuhle buvulwa
I-hypnosis njengendlela ephelele yokulahlekelwa isisindo
Ukushintshwa kwengane emkhakheni omusha wezenhlalakahle
Ukushada okulula: ngokuba nokuphikisana
Ikhekhe le-Recipe elula
Ukudla okungcono kakhulu kowesifazane onesifo sesilonda esiswini
Yini ongayinikeza ngosuku lokugubha komshado?
Ungashada kanjani futhi ungenzi iphutha ekukhetheni
Izakhiwo eziwusizo zobisi ekudleni kwesikole
Amabhisikidi anesinamoni ne-tshokoledi
Izinqubo ezijabulisayo ze-SPA
Ukuphuka kwezingane ezincane